RPS စီးရီး Linear DC စည်းမျဉ်းပါဝါပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China RPS series Linear DC စည်းမျဉ်းဥပဒေပါဝါထုတ်လုပ်သူများ
ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း RPS စီးရီး Adjustable DC Regulated Power Supply ကိုဓာတ်ခွဲခန်း၊ ကျောင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ Output Voltage နှင့် Output Load Current သည်0နှင့် Nominal Value များအကြားတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနိုင်သည်။ External Circuit Protection Function အားပိတ်ထားခြင်း နှင့် 3.3V / 5.0V / 1A. အတွက် Fixed Output ဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်း Output Voltage Power Supply နှင့် Ripple Coefficient တို့၏တည်ငြိမ်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောအကာအကွယ်ပေးသောတိုက်နယ်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Pow ၏စီးရီး ...
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co. , Ltd. Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, မြင့်မားသောဗို့အားမီတာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့်ဗို့အားမီတာ, ဗို့အားမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားစံကိုက်ညှိမီတာ, 1000v- 40kv ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ, High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ, ထုတ်ကုန်အားလုံး